အ​ကြောင်းအမျိုး​မျိုးကြောင့်​ post တိမတင်​ဖြစ်​ စာအုပ်​တိမတင်​ဖြစ်​စွာ ခွင့်​လွှတ်​ပီးကတ်ပါ​လို့ | ngalone
← မူးယစ်ယမ်းကားပြီး မိန်းမပျိုတစ်ဦအား ရိုက်နှက်သူ စစ်သားတစ်ဦးအား အရေးယူ‌ပေးရန်‌ ‌တောင်းဆိုမှု ဖြစ်‌ပွားခဲ့
UN နှင့် INGO တို့၏ လုပ်ငန်းများ ရခိုင်ပြည်သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနေဆဲ →
အ​ကြောင်းအမျိုး​မျိုးကြောင့်​ post တိမတင်​ဖြစ်​ စာအုပ်​တိမတင်​ဖြစ်​စွာ ခွင့်​လွှတ်​ပီးကတ်ပါ​လို့။ ငလုံး ngalone.wordpress.com
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← မူးယစ်ယမ်းကားပြီး မိန်းမပျိုတစ်ဦအား ရိုက်နှက်သူ စစ်သားတစ်ဦးအား အရေးယူ‌ပေးရန်‌ ‌တောင်းဆိုမှု ဖြစ်‌ပွားခဲ့